ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo လိင်ဂိမ်းများအတွက်:အခမဲ့အွန်လိုင်းဂိမ်းအတွင်း
ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo လိင်ဂိမ်းများ:အတွင်းယခု!
မင်္ဂလာပါ။ ကြိုဆိုပါတယ်! ဤသည်ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo လိင်ဂိမ်းများ:ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်သင်လုပ်နေတာမှာအ Doo ပုံစံဂိမ်းများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူတစ်ဦးရှားပါးသောဒြပ်စင်။။။သင်ဖြစ်နိုင်ထားခဲ့တော်တော်အများကြီးချက်ချင်း။ ကျွန်တော်တို့မရှက်ကြောင်းဝန်ခံသည့်အခါကျွန်တော်ငယ်၊အဓိကဇာတ်ကောင်ဒီကနေကာတွန်းကျွန်တော်တို့ကိုရတယ်တကယ်၊တကယ်ကိုခက်သည်။ သင်ရှိသည်ဘယ်တော့မှချင်မင်း Velma သို့မဟုတ်ခုခံကာကွယ်? သင်တို့သည်ထွက်ပျောက်ဆုံးနေဆဲနေတာပါကြီးမားတဲ့အချိန်ထင်မထားဘူးဆိုရင်အဲဒီနှစ်ခုအဖြစ်အဓိကလိင်သင်္ကေတ! Anyhow၊ထိုနာမည်မှာအဖြစ်ဖြစ်နိုင်အကြံပြုရန်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းကိုအားလုံးကသင်ပေးခြင်းမှဝင်ရောက်ခွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်ပါဝင်ကြောင်းဤဇာတ်ကောင်။, ထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ကြောင်းရှည်လျားတဲ့ညမ်းဂိမ်းများများအမှန်တကယ်တည်ရှိ–ကြကုန်အံ့တယောက်တည်းသောသူများဖြည့်ဆည်းမျက်နှာသို့တစ်နယ်ပယ်၊ဒီတစ်ခုနှင့်တူ! ကျေးဇူးတင်စရာ၊ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးချင်သင်သည်အဘယ်သို့ပြီးတော့နှင့်–-အပေါ်အချို့ထိပ်တန်းအဘို့အကောင်းအတိုင်း! ဒါဟာလာမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းပလက်ဖောင်းအဘို့၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာနောက်ဆုံးတင်ဖို့အဆင်သင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုက်ဆံဘယ်မှာငါတို့နှုတ်သည်သင်ပြသောအခါတွန်းအားပေးတွန်းထိုးဖို့လာရတဲ့၊အလွန်ကြီးစွာသောညမ်းဂိမ်းအွန်လိုင်းသောသူအပေါင်းတို့သည်မဖြစ်။ ချင်သင်ယူဖို့အနည်းငယ်ပိုနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းအတက်လက်မှတ်ထိုးရှေ့၌? ထို့နောက်အောက်တွင်ဖတ်ပါ–အ XXX သိပညာတံ့စီးဆင်းသငျသညျအကြှနျုပျကို–အဘယ်သူမျှမမေးသောမေးခွန်းများ!
အဆိုပါဂိမ်းကစားအာရုံစိုက်မှာကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo လိင်ဂိမ်းများ
သဘာဝကျကျ၊ဤသူအပေါင်းတို့၏ဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းဖြင့်တည်ဆောက်တစ်ခုမှာမစ်ရှင်:အောင်သင်ပည္ဆိုင္ရာဖော်ထုတ်နေစဉ်သင်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝ၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောအတူတကွ။ Velma နှင့်ခုခံကာကွယ်ကြသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရင်းမြစ်များ၏ဖျော်ဖြေရေးဒီမှာ–ကိုယ့်တဦးတည်းမှာကြည့်ဆိုကားရော်ဝက်ဘ်ဆိုက်လိမ့်မည်ကိုပြသကြောင်းသင်တို့အဘို့အဝယ်လိုအားအတွက်အကြောင်းအရာဤအမျိုးအစားအရမ်းကိုအသက်ဝင်ပြီးရှင်သန်လူး။ ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပေါ်တစ်ဦးစာကြည့်တိုက် ၁၁ ဂိမ်းများယခု၊နှင့်အချိန်ဇယားကိုဖြန့်ချိ ၃ သစ်တွေအပေါ်နှစ်စဉ်အခြေခံ။ ကျွန်တော်တို့တွေနှေးကွေး–ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အလုပ်ပြုရလိမ့်မည်နှင့်ကျနော်တို့သေချာအောင်ခြုံငုံပေးရသည်ဤလောကီထဲက။, စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဿနနှင့်ဤအကြောင်းကြောင့်၊ကျနော်တို့ဘယ်တော့မှလွှတ်ဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းစတား၊ကစားရန်ခက်ခဲသို့မဟုတ်မရှိသောများအတွက်သင့်လျော်မယ့်ထွက်ရှိ။ ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရန်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေခြင်း၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သွားမယ့်အလုပ်သင်ကိုယ်ဖြင့်ထွက်ရာပူဇော်သက္ကာသောအရာတစ်ခုခုအဆက်မပြတ်ယူတာပဲ။ ငရဲကၽြန္မအမျိုးအစားအပြာဂိမ္းချဉ်းကပ်တရားမဝင်ဖြစ်သင့်–သော့ခတ်သူတို့နှင့်ပွင့်နှင့်ပစ်ရန်! ဒါပေမဲ့လေးလေးနက်နက်:သင်ကဘေးကင်းလုံခြုံလက်၌ဒီမှာသင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အချို့သောညစ်ညမ်းနှင့်အတူတစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo ဓိက။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်၊ရှေးရှေး။
အဆိုပါဂရပ်ဖစ်တို့ဤစီမံကိန်းကိုအလွယ်တကူအရေးအပါဆုံး:ဒါဟာညာဘက်ကိုကြည့်! အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲမယ့်တစ်ဦးလုံးဝညစ်ညမ်းသောအချိန်ပမာဏကိုရတဲ့အဆင္အျအားလုံး၏အစာမှန်အောင်ကယ်မနှုတ်နိုင်သင်ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းဖော်ရန်သင်မျှော်လင့်။ ငါအရမ်းတင်းကျပ်မှအစသာလည်း:အတိုအချည်း ၁၀၀%တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ပြည့်စုံသွားခဲ့သည်ခံရဖို့ခွင့်ပြု။, ရှင်းပြပါရစေတစ်ခုခုသင်ဖို့၊မိတ်ဆွေတို့ရေ:လျှင်အသင်သွားအနှောင့်အယှက်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းညမ်းဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်လုံးဝအားလွဴဒါန္းနှင့်အထောက်အပံ့အထွေထွေပြည်သူ့ထံမှ၊သငျသညျအကောင်းသွေးထွက်သံယိုဘုရားသူကပြောတယ်သေချာအောင်သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဂိမ်းအမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်များနှင့်ကျွန်မထင်တဲ့အထိနှင့်ထောင့်အပေါ်ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo ဂိမ်းတစ်ခုခုဖြစ်သွားသင်အမှန်တကယ်လေးမြတ်တန်ဖိုးထား။ အနုပညာလက်ရာများဖြစ်ပါသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုအတုထွက်သည်ဤလောက၏။ သင်ကမယ်ထင်သူတို့အားယောက်ျားတွေကူးပြီးမ–ပတ်လည်အခြားလမ်း!, အိုး၊ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းတိုတိုတုတ်တုတ်မီ-ဒီအလုံးဝအခမဲ့။ သင်ရနိုင်အတွက်ပေးဆောင်စရာမလိုဘဲတစ်ဦးပြားနှင့်အချက်ကိုအတွက်၊သုံးတပြင်လုံးကိုဆိုက်မည်မဟုတ်ငှါသင့်ကိုစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူငွေသား။ ကျနော်တို့အပြုအလှူအဖြစ်၊အဖြစ်ကြော်ငြာ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အတော်လေးအတူပျော်ရွှင်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိစီမံကိန်းများနှင့်ရုံရချင်ဖြစ်များစွာသောလူဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တတ်နိုင်သမျှ!
နေတယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအလားအလာရှိခြင်း၏တစ်ညမ်းဂိမ်း၊စိတ်မပူပါနဲ့:အားလုံးခေါင်းစဉ်တင်ထားသောနေကြတယ်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆာဗာဒီမှာကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo လိင်ဂိမ်းများနှင့်သင်လိုအပ်သမျှသူတို့ကိုဝင်ရောက်ဖို့အစံ။ Chrome၊မြေခွေးနှင့်ရှုကြ၏မူလထောက်ခံရွေးချယ်မှုများသော်လည်း၊အများစုအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်(ကျွန်တော်အာမမခံလိုက်ဖက်တဲ့၊ဒါပေမယ့်ဘာမှမခေတ်သစ်ခံရဖို့ဖြစ်ကောင်းပြီ)။ ဒီစကိုဆိုလိုတယ်အားလုံး၏ကယ်တင်ပြီးအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုများကိုင်တွယ်သည်ငါတို့အားဖြင့်:အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ကိုယ်တိုင်ဘာမှလုပ်! တော်တော်အေးမြ၊အယ်? အိုးလျှင်သင်အံ့သြနေတယ်ဆိုတာကျနော်တို့မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်ထောက်ခံမှု–လုံးဝ!, ကိစ္စမရှိပါဘူးဘယ်အစက်ကိရိယာပေါ်မှာဆိုရင်လျှင်ကြောင့်ပြေးတစ်ဦး၊သင်သွားဖို့အနိုင်ကစားရန်အပြည့်အဝဂျီခေါင်းစဉ်၏ရှင်အဖြစ်လက်ခံဒီမှာအပေါ်ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo လိင်ဂိမ်းများ။ ကြောင်းသတိပြုမိပါနဲ့နောက်ဆုံးမှာကျနော်တို့ပေးလိမ့်မည်ဒေသခံတစ်ဦးညာဂ်ာများအတွက်အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းဒါပေမဲ့ဒီအမည်ဖြစ်လုံးဝကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဒေါင်းလုပ်နှင့်အင်း:ဒါဟာမလိုအပ်အဖြစ်ပုံမှန်ရွေးချယ်မှု။ အခြေခံအားဖြင့်၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဒီအစက်အပြောက်၏နေအိမ်များအတွက်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်၏ဂိမ်းနှင့်ချွတ် jerking၊ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳပရဒိသု!
ကျွန်တော်ဖော်ပြမနိုင်လွန်း၊ဒါပေမယ့်အဘယ်သို့ငါပြောလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့သွားမယ့်ခံရဖို့အများကြီးလုပ်နေတယ်အရူးအမှုအရာကျော်ကိုလာမယ့် ၁၂ လအတွင်းကသွားအောင်အများအပြားကျော်ကလူအလကဘယ်လိုလုပ်ကိုင်ကြရာ၊ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွား။ ည့္ရေရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ထားရန်:သငျသညျအသွားဖို့သက်သေခံအချို့အလွန်အမင်းပူပြင်းညမ်းဂိမ္းအခြေအနေ၊အဖြစ်အနည်းငယ်ဗီဒီယိုမှာပဲကျွန်တော်တို့ရတဲ့အနေအထားများအတွက်သီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ယက်။ ကျွှန်တော်တို့အထဲကအချို့သောနမူနာများမကြာမီလုံလောက်တဲ့၊ဒါပေမယ့်လို့ပြောလုံလောက်တစ်ရာသီသစ်၏ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo စေခြင်းငှါမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်–ဒါကြောင့်ပဲရှိစေခြင်းငှါအလွန်အမင်းအရွယ်ရောက်အမ်ဳိးအစားအဖွင့်အဘယျသို့သင်တို့၏ပုံမှန်အသုံးပြု!
ဒါကြောင့်၊မိတ်ဆွေ–ခုန်ချင်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အဘယ်အရာကိုမြင်အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ္းယိုပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်? ထိုအခါသင့်ရဲ့အခမဲ့အကောင့်ကိုဒီကိုအလွန်အကြာထက်လျော့နည်း ၆၀ စက္ကန့်နှင့်အညီဖြစ်ရန်အတွက်၊သင်အပြည့်အဝရတဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo လိင်ဂိမ်းများအတွေ့အကြုံ။